Soo-saaraha Xarigga Xargaha Power Power
Hoyga > Alaabada > Xarkaha > Xarigga korontada
1. Xarigga korontada ee xarrunta korontada waxaa loo isticmaalaa isku xirka gudbinta astaamaha dareeraha heerkulka ee qeybaha kala duwan ee koronto-dhaliyaha saldhigga korontada.
2. Caabbinta saliidda, adkeysiga heerkulka sare iyo u adkaysiga daxalka. Waxay leedahay sifooyin farsamo oo aad u fiican, waxay u adkeysan kartaa saameynta birta ee xoogga sare leh iyo goynta; Xoog aad u sarreeya, wuxuu u adkeysan karaa foorarsiga muddada-dheer. Gawaarida gaashaaman ee birta ayaa iska caabiya faragelinta aagagga birlabta ee korantada iyo korantada ee gudbinta. Dareemka qalinka ee naxaasta ah wuxuu ka ilaaliyaa kaaliyaha inuu ku sii daayo jawiga heerkulka sare ee muddada dheer sidoo kale wuxuu hagaajiyaa habsami u socodka kaari. Fiilo badan-xuddun ah, adkeysiga labada koronto waa mid aad isu dheellitiran, farqiga caabbinta ayaa ka yar 0.05Ω/ 100m.
Xariga korantada ee korantada
Xadhiggu wuxuu leeyahay caabbinta kuleylka sare, iska caabbinta heerkulka wareegga-gaaban, jilicsan oo si sahlan loo rakibo, dib-u-habeyn la'aan halogen, saliid iska caabin, iyo iska caabbinta jiirka.
KYJYP2 KYJYP3 fiilada xakamaynta
Iskuxirka calaamadaha iyo wareegyada xakamaynta ee udhaxeeya qalabka korontada ee kaladuwan ee leh shuruudaha waxqabadka dabka ee gaarka ah wuxuu la kulmayaa GB / T19666-2005; Heerkulka keydka ee keydka kama yarayo 0 C; Raadiyaha qalooca ee xariggu kama yarayo 8 jeer banaanka. dhexroorka xarigga (xarigga leh gaaska naaska lagu duubo oo aan ka yarayn 12 jeer dhexroorka dibadda ee xarigga); Markuu gubanayo, cufnaanta qiiqa gaaska ayaa yar, oo aan sun ahayn.
KYJYP fiilada xakamaynta
Raadiyaha qalooca ee fiilada ma ahan in ka yar 8 jeer dhexroorka banaanka ee cable-ka (xarigga leh gaashaanka cajaladda naxaasta ah kama yaraan 12 jeer dhexroorka banaanka); Marka gubanaya, cufnaanta qiiqa gaaska ayaa yar, oo aan ahayn -sunta ah; Caabbinta dabka waxay u egtahay GB / T19666-2005; Heerkulka keydka ee la dhigaa kama yaraado 0â ƒ.
KYJY xakamaynta fiilada
Raadiyaha qalooca ee fiilada ma ahan in ka yar 8 jeer dhexroorka banaanka ee cable-ka (fiilada leh cajaladda naxaasta ee kahooseeya kama yaraaneyso 12 jeer dhexroorka banaanka ah) .Marka uu gubanayo, cufnaanta qiiqa gaaska waa yar yahay, -wax sun ah.
CAT5 100 ohm isku dheelitir iyo fiilo qaloocan
Nooca xarkaha xogta wuxuu ku saleysan yahay shuruudaha waxqabadka ilaalinta dabka ee warshadaha tareenka. Xilliga dabka, qiiqu aad ayuu u yar yahay markii fiiladu gubato, qiiqu ma aha mid sun ah, waa mid wax dumin kara oo aan ololi karin, fiiladuna waxay leedahay astaamo wanaagsan oo EMC ah.
Xarig koronto kumbuyuutar saldhigga
Fiilooyinka koombiyuutarka ee saldhigga korontada waxaa badanaa loo isticmaalaa isku xirka qalabka otomaatiga iyo khadadka ilaalinta aaladda, sidoo kale waxay ku habboon yihiin isku xirka khadadka ilaalinta otomatiga badbaadada dadweynaha. Xarigani wuxuu gudbin karaa calaamadaha analogga iyo dhijitaalka ah.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Xarigga korontada soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Xarigga korontada kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.